true love – Healthy Life Journal
All posts tagged "true love"
အနမ်းများစွာနဲ့ ထုပ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဆောင်
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်ရက်မှာ ဦးနိုင်ထွန်းဟာ သူရဲ့ ငါးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ရွှေရောင်ပါကင်စက္ကူလိပ်တွေ ဖြုန်းတီးတယ်ဆိုပြီး ဆူပူပါတယ်။ သမီးလေးက ရွှေရောင်ပါကင်စက္ကူတွေကို ထုပ်ပိုးပြီး လက်ဆောင်ဘူးလေးတွေ လုပ်နေလို့ပါပဲ။ သမီးလေးက ဆူပူနေတဲ့ဖခင်ကို အရေးမထားဘဲ လက်ဆောင်ဘူးတစ်ဘူးကိုယူပြီး “ ဒါက...
ချစ်သူတွေ နှစ်ကိုယ်တူဘ၀ထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လေ့လာသင့်ပါတယ် . . .
———၊ လရိပ်မေ ၊——— ချစ်သူနှစ်ဦး နှစ်ကိုယ်တူဘ၀ ထူထောင်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို ကြည့်သင့်တယ်လို့ life coach လီဆာအေရိုမာနိုက ဆိုထားပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့- (၁) တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မှားသွားတဲ့အပြုအမူ၊ မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက် တောင်းပန်နိုင်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အသိတရားရှိရပါမယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်နှစ်အကြာက ကျွန်တော့်ချစ်သူ ကားတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ခါးကျိုးသွားပြီး စိတ်ဓာတ်အကြီးအကျယ် ကျသွားတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ နောက်တစ်ခါ လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အလွန်အမင်း ထိခိုက်သွားတဲ့ ချစ်သူ့အတွက် စောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ ကျွန်တော်က ကုန်စုံဆိုင်ကနေ ပြန်လာချိန်မှာ သူ့ကလေးတွေ စားစရာမရှိလို့ ငွေစနည်းနည်းပေးပါဆိုပြီး တောင်းနေတဲ့ လူတစ်ဦးကို လမ်းမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေက သူ့ကိုငွေမပေးဘဲ ကုန်စုံဆိုင်က ၀ယ်လာတဲ့အထဲက ဆန်၊ အသား၊ မုန့်၊...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်ခါတုန်းက ခံစားချက်မျိုးစုံ ရောပြွမ်းရှိနေတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်း ရှိပါသတဲ့။ ဘာခံစားချက်တွေလဲဆိုတော့ကား-ပျော်ရွှင်မှုရယ်၊ ၀မ်းနည်းမှုရယ်၊ အသိပညာရှိမှုရယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရယ် . . စတဲ့ ခံစားချက်တွေ အစုံအလင်ပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ ဒီကျွန်းကြီး နစ်မြုပ်တော့မယ်လို့ ခံစားချက်တွေဆီ...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကောင်မလေးက သူ့ချစ်သူကို တစ်နေ့မှာ စိန်ခေါ်ချက် (Challenge) တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ “ ရှင့်ဘ၀မှာ ကျွန်မမရှိဘဲ သုံးလလောက်နေကြည့်စမ်းပါ . . အဲဒီလိုများနေနိုင်ခဲ့ရင် ရှင်တောင်းထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ကျွန်မလက်ထပ်ပါ့မယ်” ကောင်လေးက ချစ်သူကို...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ကြင်နာစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းကို အချိုးကျကျ ရောစပ်ထားတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ အရာရာတိုင်းကို စောင့်ရှောက်ပြီး ယဉ်ကျေးဖော်ရွေမှုရှိတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ အရာအားလုံးလည်း ဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြဖို့ နည်းလမ်းအများကြီး ရှိပါတယ်။ လော်ရန်းက...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျွန်တော့်မိခင်မှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်မုန်းပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အမေက ကျွန်တော့်အတွက် အတော်လေးစိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာပါ။ သူက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက် ထမင်းဟင်းချက်ပေးတဲ့အလုပ်နဲ့ ငွေရှာပါတယ်။ တစ်နေ့ကျတော့ အမေက...
လမ်းကူးတဲ့အခါ . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုလွင်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး အပြင်တွေထွက်လည်တိုင်း မေ သတိထားမိတာ တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ သူဟာ မေနဲ့အတူ လမ်းကူးတဲ့ အခါ ကားလာတဲ့ ဘက်မှာ ဘယ်တော့မှ မနေတာပါပဲ။ အရင်ကသေချာသတိမထားမိပေမဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က...
ဧပွီ လ၊ 2021 ခုနှဈ